आइपर्ने समस्याको माटोमाफिक हल होस्, अनि पो हुन्छ,
सम्पूर्ण जनतामा राष्ट्र निर्माणको बल होस्, अनि पो हुन्छ,
स्थानीय तह भन्दै जथाभावी गर्ने जागिरे नेतालाई भन्छु:
केन्द्रजत्तिकै पहुँच र अवस्थामा मोफसल होस्, अनि पो हुन्छ !
पङ्क्तिकारका यिनै भनाइभावमा समर्थन राख्ने कवि तारानाथ पोखरेल सत्य तथ्यमा कलम चलाउन सिद्धहस्त मानिन्छन् ! खोटाङ खार्पामा १९९७ मा जन्मिएका पिता रेवती पोख्रेल र माता छमनादेवीका पुत्ररत्न तारानाथ हाल विराटनगरका वासिन्दा हुन् ! उमेरले असी छुन लागेको अवस्थामा पनि अठारको युवा जोश अहिले पनि सिर्जनामा साँधीहिंड्ने उनी सटिक बोली र हक्की स्वभाव राख्ने भद्र स्रष्टाका रूपमा छवि बनाउन सफल छन् ! उनमा रहेको रचनात्मक व्यंग र ठट्यौलीको समुन्द्र उनका सिर्जनामा ज्यान भर्ने कडी भएर राजेका छन् ।
गद्यकविता तथा निवन्धसमेतमा कलम चलाउने उनी गजल कोर्न र वाचन गर्न सिपालु मानिन्छन् ! अन्य लेखरचना विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्दै र प्रस्तुतिका आँगन टेक्दै आएका वयोवृद्ध उनका पछिल्लो समयमा सिर्जित पुस्तक 'सीतारा' गजलसंग्रहबाट यो गजल:
जहाँ जान्छु त्यहीं जाली-जाली देख्छु,
जहाँ पुग्छु कुर्सी खाली-खाली देख्छु !
वगैंचा झन्-झन् उजाड भैरहेछ, जताततै केवल माली-माली देख्छु !
तलमाथि जसको छ आफ्नो मान्छे, उसैको म त हालीमुहाली देख्छु !
कृषिप्रधान भन्छन् नेपाललाई,
रोइरहेका हलो र कोदाली देख्छु !
समस्या देखेर हाँसीटोपल्ने सतही विचारक अनि समस्यामात्र देखाएर खैलाबैला मचाउने सजिला लेखकभन्दा पृथक पोखरेल समस्या औल्याउँछन् अनि समाधान सम्बन्धितलाई सुझाउन प्रष्ट छन् ! फेरी यो गजल हेरौं :
नेपालमा कृषिक्रान्ति गर्नुपर्छ अब, माटो जाँची राम्रो बीऊ छर्नुपर्छ अब !
जनताले दुख पाउनेजति पाइसके धेरै राजनीति सम्याएर कष्ट हर्नुपर्छ अब !
सहकारी चकलाबन्दी खेती लहलह पारी गर्नेतर्फ मनस्थिति हाम्रो सर्नुपर्छ अब !
अरुजस्तै हाम्रो मुलुक पारौं विकसित छिचोलेर भूमरी त्यो पारी तर्नुपर्छ अब !
देश विकास गर्ने जाँगर नीताजीमा जागोस् अभावका श्रिङ्खला ती टर्नुपर्छ अब !
छन्द र बह्र कम र तुक तथा लयसम्म समाई वाचनका लागि गजलित भाव प्रकट गर्नु पोखरेलका विशेषता नै हुन् । उनका रचनामा वस्तुनिष्ठ चित्रण, माया-प्रेम तथा राष्ट्रियचिन्तनका कुराहरू बढी सशक्त रहेका हुन्छन् ! यो प्रेमिल रचनाले उनलाई उच्चकोटिको प्रेमी दर्ज गर्न सक्षम प्रतीत हुन्छ :
तिमी सजिएको लाली चोर्नपाए हुन्थ्यो, सँगसँगै बसी गजल कोर्नपाए हुन्थ्यो !
हामी भयौं बेग्लाबेग्लै ठूलो सानो जात विभेदबिचका पर्खाल फोर्नापाए हुन्थ्यो !
तिमी कहाँको म कहाँको संयोगले भेट भो हामी दुईको घरजम पनि जोर्नपाए हुन्थ्यो !
आराध्यको आराधना मिलिजुली गर्दै
फगुवाको रंग सबै घोर्नपाए हुन्थ्यो !
कुरा जे भएपनि काम गरिरहनुपर्छ र स्तरीयता बढाउँदैलानुपर्छ भन्ने सोचका धनी पोखरेल मोफसलमै बसेर पनि धेरै काम भैरहेकामा खुशी मान्छन् ! भानुभक्त पोखरेल बितेर जानुभयो; उहाँको ताप छ हामीमा !
त्यस्तै प्रल्हाद पहरेदार चतरामा हुनुहुन्छ ! मनु मन्जील इटहरीमा हुनुहुन्छ ! मात्रिकाप्रसाद संग्रौला झापामा ! काठमाण्डुदेखि हामी पूर्वमा छौं ! अनि गुल्मी भनेपनि पाल्पा भनेपनि भागीरथी श्रेष्ठ पश्चिममा हुनुहुन्छ ! सबैको एउटा छवि छ, उचाइ छ ! केन्द्रमा नभएर के भो त ! पहुँच र प्रचारको कुरा पनि छ, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड भन्ने उनका प्राय रचनामा जुझारुपन भेटिन्छ र केही गर्नसकिन्छ गरौँ भन्ने उर्जापूर्ण संदेश रहनेगर्छ !
युवापुस्ताले त झन् मौकामात्र पाए धेरै कुरा हुन्थ्यो ठान्ने उनीद्वारा रचित एक गजलको मतला हेरौं: झिंजाले मूढा डढाउन सक्छन् सानाले ठूला लढाउन सक्छन् ! मोफसलका सशक्त हस्ताक्षरमा आसन्न गजल संग्रहको सफलताका लागि शब्दभरी साहित्यिक शुभकामना पनि !
प्रस्तुतिः नाराणण नेपाल
प्रकाशित २८ बैशाख २0७६ , शनिबार | 2019-05-11 02:31:24